Xagee loo arki karaa jilitaanka Tansaaniya ee Portland, Oregon
Mareykanka Oregon Portland
Portland Comedy Bandhigay
Xaggee Laga Helaa Laugh
Marka ay timaado Portland Comedy, waxaa jira fursado badan oo qosol leh. Qosolku wuxuu sare u qaadaa habka difaaca jirka wuxuuna yareynayaa saameynta taban ee walbahaarka jirka. Iyo, way adag tahay in lagu doodo xaqiiqda ah in qosolku uu kugula jeedo inaad dareentid fiicnaan. Qaado waxoogaa badan oo giijis ah maalintii aad la socotid mid ka mid ah bandhigyada tiyaatarka Portland iyo soo jiidashada.
Maxaad: Iska hubi habeenkii asbuuca ee furan iyo bandhigyo waaweyn oo lala yeesho muusikada qaran ahaan loo yaqaan.
Deeqaha magacyada waaweyn ayaa u dhaxeeya $ 20- $ 30. Waa inaad ahaato 21 jir inaad kaqaybqaadato bandhigyada Helium.
1510 SE 9th Avenue (9th Avenue iyo Hawthorne Blvd., albaabbadu waa koofurta Hawthorne 9aad)
Maxay tahay: Horumarka qoyska ee isboortiga wuxuu muujinayaa jimce iyo sabtida. Comedy Sportz ayaa sidoo kale baraysa fasallo horumarineed waxayna qabataa seminaaro shirkadeed oo loogu talagalay dhisidda kooxda iyo wax ka badan. Bandhigyada intooda badani waa $ 12 ka hor.
Ka hel tikidhada internetka
Comedy Club ee Harvey
Maxay: Harvey wuxuu bixiyaa bandhigyo dhowr ah todobaadkii (Wed - Sun) oo ay ku jiraan habeenkii furan iyo falalka kale ee taagan.
436 NW 6th (Galkacyo)
Maxay tahay: Mics ma furan, bandhigyada kale waa $ 15. Samee boos celin adiga oo wacaya lambarka sare.
15450 SW Millikan Way Beaverton, OR (ku dhow Hwy 26 iyo Murray Blvd)
Maxaad: Si aad u hesho tigidhada, wac 503-626-6338 ama u dir email ugu dir Jester@kingstad.com.
Tikidhada waa $ 10 horay iyo $ 15 albaabka. Waxaa jira ugu yaraan 2 shey oo kooxda waa 21 jir iyo ka weyn.
Maxay tahay: Qaybta Saddexaad waa joornaal jilicsan. Waxay jadwalku muujinayaan magaalada. U fiirso boggooda internetka wixii faahfaahin ah iyo jadwal.
Sameeysho horumarin ah
Maxay: Iskudhinjiyeyaashu waxay bixisaa aqoon isweydaarsiyo horumarineed iyo waxay ku dhajisaa bandhigyo cajiib ah.
Ka hubi jadwalka jadwalka. Waxa kale oo aad wici kartaa 503-796-9550 si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah ama email u soo dir info@brainwavesimprov.com
Eddie May Masraxa Madadaalada
Maxay tahay: Custo, casho iyo MURDER. Bandhigga isdhexgalka ayaa sii wadi doona inaad ku raaxaysato. Yaa ogaa dilka inuu noqon karo mid xiiso leh?
Spike iyo Mike Film Festivals
Maxay tahay: Spike iyo Mike waxaa loo yaqaanaa jirdiladooda iyo xayawaanka animation. Waxay kugula wareegi karaan. Ama waxay kaa dhigi karaan qosol ilaa laga helo biirka xididka ka soo baxaya sankaaga. Ama labadaba.
Goobta: Dabbaaldegga ayaa u socdaalay Portland si joogta ah, waxaadna hubin kartaa bogga internetka ama waxaad ku qori kartaa bogga Cinema 21 (xafladaha sida caadiga ah waxay dhacdaa).
Tilmaamaha Munaasabadaha Safarka Wanaagsan ee Portland, Oregon
Maalinta Safarada ugu Fiican ee laga Qaado Portland, Oregon
Xaggee Laga Helaa Qiimayaasha Halloween
Hagaha Baarkinka Portland
Aria Las Vegas Resort, Hotel iyo Casino
Ku safrida Koonfurta Aasiya Dhibkani? Halkan Waa Maxay Tahay!
Dumbarton House: Matxaf Taariikhi ah oo Georgetown ah
Sidee loo baraa caruurta yaryar ee snorkel
Las Vegas waa A Honeymoon Haven
Qodobbada Jacaylka Caanka ah ee ka soo jeeda Shakhsiyaadka Caanka ah
Goorma Caymiska Socdaalku Si Kuma Bixin Kara?
Tilmaamaha Safarka ee Namibia: Xaqiiqda Muhiimka ah iyo Macluumaadka
Raashinka ku yaala Singapore ee Bukit Timah Hawker Center
Faahfaahinta Stanley Market
Ugu sareeya 6 Dalabyada Dominica Ecotourism